Apụghị m ịchọta igbe "Preview DirectX 10" na ntọala nke FSX. Kedu ihe m kwesịrị ịme ? - Rikoooo
M ike ịhụ ndị «Preview DirectX 10» igbe na ntọala nke FSX. Kedu ihe m kwesịrị ịme ?
Mbụ, tụlee na ị nwere FSX-SP2 arụnyere na kọmputa gị. N'ezie, ndị « Preview DirectX 10 »Naanị na-egosi ma ọ bụrụ na ị rụnyere na SP2 kwachie ma ọ bụ ma ọ bụrụ na i nwere FSX osooso ma ọ bụ FSX Gold ma ọ bụ FSX Steam Edition.
N'okpuru ebe ị nwere ike ibudata ma patches